UKUSETYENZISWA GWENXA OKUPHEZULU OKUNGU-4 KOMTHETHO WAMA-80/20 - INGQALELO
Ukusetyenziswa gwenxa okuphezulu okungu-4 koMthetho wama-80/20
Iipesenti ezisibhozo zemveliso zivela kumashumi amabini eepesenti yegalelo. Esi sisishwankathelo sefayile ye- Umgaqo wePareto , okanye njengoko kusaziwa njalo, umthetho we-80/20. Umthetho uvela kuVilfredo Pareto, isazi ngezoqoqosho sase-Italiya esiqaphele ukuba i-80% yobutyebi base-Itali isezandleni ze-20% yabemi..
Umgaqo we-80/20 uchaza ukungalingani kweziphumo. Njengokuba umntu omnye enokubanamaxesha amaninzi ubutyebi bomnye, iyure enye echithwe kwiprojekthi ebalulekileyo inokuxabisa i-R10 000Ngelixa enye inokubiza i-20 kuphela. Injongo xa usebenzisa umthetho we-80/20 kukwandisa iipesenti ezincinci ezinamandla kwaye zinciphise inkcitho engamashumi asibhozo eepesenti .
Ngaphandle kokuthandwa komthetho, bambalwa abantu ababonakala ngathi bayawuqonda. Ndibone amakhulu okusetyenziswa gwenxa kunye nokudideka okusasazeke kuyo yonke iwebhu kunye nokuprintwa. Ezinye zezi mpazamo zibangelwa kukungaqondi nje ukuba umthetho uthetha ntoni. Abanye luluvo lwam nje lokuhlaselwa ngokungafanelekanga kumgaqo oluncedo.
Nazi ezona nzame zimbi zokusebenzisa umgaqo wama-80/20:Intengiso
Ndibonile amaxesha ambalwa apho abantu bazama ukwenza umzobo ochaza umthetho we-80/20 ngetshathi yepayi. Isinye kwisihlanu setshathi yepayi sinelebheli engama-20% kwaye enye ibhalwe i-80%. Ngelixa abo kuthi banezakhono ezisisiseko zezibalo benokubona ukuba oku kudibanisa njani ukuya kwi-100%, ukubala kujongela phantsi umthetho ongantoni.
Iimuvi zokubukela kunye nesoka
Umgaqo we-80/20 uthi i-20% yegalelo idala i-80% yemveliso. Igalelo kunye neziphumo ayifani kwaye, ke, ayinakubekwa kwi ngokufanayo itshathi yephayi. Umgaqo wama-80/20 unokubizwa ngokulula ngokuthi ngumgaqo wama-55/3, ukuba ama-55% eziphumo ayenziwe nge-3% yegalelo.
Musa ukubanjwa ngamanani. Zombini ezingama-80 nama-20 yimizekelo nje yohlobo olunye lokulinganisela okungalinganiyo. Inyani yokuba badibanisa ukuya kwi-100 yinto eyenzekileyo.
2. 80/20 Isetyenziswe Ngokuphinda
Impikiswano enye endiyivileyo ngokuchasene nomgaqo we-80/20 ihamba ngolu hlobo: Ukuba uqhubeka nokusebenzisa umthetho we-80/20, ushenxisa inkcitho engama-80%, ekugqibeleni awuyi kuphela. Ndicinga ukuba abantu abaphikisanayo ngeli nqanaba baziva ngathi babekrelekrele ngokusebenzisa utoliko lwenene, lwezibalo lolawulo.Intengiso
Kwakhona, amanani apha akabalulekanga kangako. Ezona zicelo azikho kwimathematics. Xa une ixesha elilinganiselweyo , ngekhe ukwazi ukwenza yonke imisebenzi enokwenzeka. Umgaqo we-80/20 ucebisa ukuba ujonge kuyo yonke imisebenzi oqhele ukuyenza. Khetha i-20% ephezulu eyenza ezona ziphumo kunye nokugxila kuzo. Naliphi na ixesha olishiyileyo lingachithwa kwimveliso engaphantsi kwe-80%.
3. 80/20 Ukufezekisa
Enye indlela ndibone ukuba umthetho usetyenziswe gwenxa kuxa kusakhiwa izakhono. Kungathatha iminyaka emibini ukuba ube yi-80% yobuchule. Kodwa ukuze ufumane isakhono sokugqibela sama-20%, kuya kufuneka utyale enye iminyaka esi-8. Ngelixa ukusetyenziswa okufanelekileyo komgaqo, ingcebiso ngezakhono ihlala iphikisana nomgaqo we-80/20. Endaweni yokuphelisa isidingo sokugqibela se-20%, utyala ixesha lakho elininzi ukuze ufumane i-20% yokugqibela.
Zithini iziphumo ebezingalindelekanga zeprobiotic
Inqaku lomgaqo we-80/20 kukuba kufuneka ubukele ezantsi okanye unciphise ukungasebenzi kakuhle kwama-80% egalelo. Kukho amaxesha, ewe, xa lo mthetho ungasebenzi. Ukulawula ubuchule inokuba yenye yezo ndawo apho iingcebiso ezingama-80/20 zinemposiso.
Nangona kunjalo, ngokucebisa ngokuchaseneyo yomgaqo we-80/20, ngekhe ubange ukuba umthetho we-80/20 uyasebenza apha. Oko kuya kufana nokuthi ukungxama ukwenza inkunkuma ikwayingcebiso efanayo nalowo uthandabuzayo ulahlekile.Intengiso
4. Kodwa kusafuneka ndiyenze…
Impikiswano endiyivileyo ngokuchasene nomgaqo we-80/20 ihlala ihamba ngolu hlobo, Ngokuqinisekileyo, eminye imisebenzi ayixabisekanga kunabanye, kodwa oko akuthethi ukuba akufuneki ukuba yenziwe. Ukuphendula i-imeyile, ukufowuna, okanye ukuba neentlanganiso kunokubonakala kuyinkcitho, kodwa kusafuneka bagqibe, kunene?
Le mpikiswano inento yenyaniso, kodwa iyafihla ubuxoki obukhulu. Inyani yile, ewe, kukho izinto ekufuneka zenziwe nangona zingabalulekanga. Ukuba ndiyekile ukuphendula i-imeyile, ndingaphoswa ngamathuba, ndinokuthotywa kwenethiwekhi, okanye ndiphulukane nemiyalezo ebalulekileyo.
Ubuxoki obukhulu kukuba awunalawulo ekuhlengahlengiseni apho ixesha lichithwa khona. Ukuba i-imeyile ayibalulekanga kangako, injongo yakho kufuneka ibe kukunciphisa ixesha olichitha kuyo. Ukuba iintlanganiso azinanxaxheba kwinkampani, kuya kufuneka ube neentlanganiso ezimfutshane. Ukuba izandla zakho zibotshiwe kwaye awunandlela yakulawula ukuba ixesha lakho lisetyenziswa njani, yeyiphi inqaku lokufunda iibhlog zemveliso ezinje ngale ndlela?
yomelela njani ngokwengqondo
Uwusebenzisa njani ngenene umthetho wama-80/20
Khetha indawo yobomi bakho apho uziva kukho ukungalingani kweziphumo. Oku akuyi kuba yinyani kuzo zonke iindawo, kodwa iimeko ezininzi azinabhalansi (imali, ixesha, impilo, kwaye nokuba ubudlelwane).Intengiso
Emva koko, zama ukuchonga isitshixo se-10, 20, okanye i-40 yepesenti yegalelo elidala uninzi lweziphumo zakho. Oku kunokuba sisi-10% sexesha esenza eyona mbuyekezo. Isenokuba ngama-40% obudlelwane obukwenza wonwabe kakhulu.
ebusuku owl vs ntaka kwangoko
Nje ukuba wenze, oku, fumana iindlela zokugxininisa ipesenti ephambili. Chitha ixesha elininzi kwezo zinto. Beka kuqala kwishedyuli yakho. Dibana nabahlobo bakho abaphambili rhoqo. Gcina imali yakho eninzi kwizinto eziza kukunika eyona ntuthuzelo okanye uvuyo.
Okokugqibela, Funa iindlela zokwenza umdlalo ongezantsi okanye wokuphelisa okuseleyo. Lahla imisebenzi engenakho ukufumana umvuzo omkhulu. Yeka ukuchitha ixesha kubudlelwane obungadali ixabiso elaneleyo. Yeka ukuchitha imali kutyalo-mali olungakunika umgangatho wobomi omkhulu.
Iingcebiso ezingakumbi ekusebenziseni umthetho we-80/20
Iindlela ezingama-20 zokuSebenzisa umThetho wama-80/20
Nguwuphi umthetho wama-80 wama-20 (kunye nendlela yokuSebenzisa ukuKhulisa ukuvelisa)
Ukulahleka kobunzima bomzimba: Umgaqo we-80/20 oya kuLumkela
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: UAustin Distel nge unsplash.com Intengiso
 ^ Forbes: Umthetho wama-80/20 kunye nendlela onokubutshintsha ngayo ubomi bakho
 ^ USteve Pavlina: Uyifumana njani i- $ 10,000 kwiYure enye
yeka ukukhathazeka kwaye uqale ngokuphila
utya ukutya okuneziqholo okulungele wena
ukuzilolonga komzimba kwabaqalayo
ukuba wenze ntoni kwisikhumbuzo sokuqala
Unxibelelwano Ukucinga Ngendlela Eyakhayo Umsebenzi Weengcebiso Ngamakhondo Amandla Engqondo Indlela Yokuphila